China 92 ​​alumina ceramic lining tube for abrasion and corrosion resistant solution ifektri kanye nabaphakeli | YUNFENG
I-92 alumina ceramic lining tube yesibhaxu nesixazululo esimelana nokugqwala
Faka ipayipi le-ceramic elimelana kakhulu nokusetshenziswa kwensimbi, izimayini, ugesi, amalahle, i-petrochemical nezinye izimboni, uhlelo oluqinile lokuhambisa igesi, ikakhulukazi ukulimala okukhulu kwenzeka endololwaneni, izixhumanisi ezintathu. Ukugqoka okuhle ukumelana nokwamukela i-alumina ceramics njenge-liner, isikhathi sempilo sepayipi singaphezu kwezikhathi eziyi-10 kunensimbi ejwayelekile eqinile. Ukumelana nokugqwala i-Alumina ceramic inezinzuzo zokuguguleka kwamanzi olwandle, ukumelana ne-acid ne-alkali, futhi kukhulisa nokuvikela. Umkhuhlane pr ...
Faka ipayipi le-ceramic elimelana nokugqoka
izinga lokushisa eliphezulu ceramic
Ingasetshenziswa njengebhola elihambayo, i-roller, isihlalo sebhola, i-tooling, amathuluzi amasha wokusika we-ceramic, ipompo yepiston, ukubekwa uphawu kwempahla embonini yemishini;
Ingasetshenziselwa ukukhiqiza ipuleti yomoya ye-valve kathathu kanye neshubhu yangaphakathi preheater embonini kasimende ,;
Ingasetshenziswa njengezinto zokumelana nokugqwala nokugqwala, njenge-valve yebhola, umzimba wepompo, i-carburetor yomlilo nesihlungi embonini yamakhemikhali.
Kungenzelwa ukucutshungulwa kwensimbi kwempahla yokwenza isikhunta nokufa, njengokuqothulwa, i-mandrel, i-extrusion, isikhunta socingo, ukugoqa, ukuhambisa i-roller, ukufudumeza umzimba, ipayipi lezimbangi ezishisayo, ukwesekwa kokushisa kwensimbi, i-crucible, i-liquid aluminium tube , i-aluminium camera line r embonini ye-metallurgical.
Ingasetshenziselwa izimoto ezihlome ngezikhali, isisu sendiza, okokugqoka okufakazela izinhlamvu, umlomo wombhobho we-rocket nomunye umsebenzi wokushisa okuphezulu embonini ye-aerospace;
Langaphambilini Gqoka futhi uthinte i-92 alumina ceramic lining cone tube / taper tube yepayipi lokuhambisa ezimayini
Olandelayo: I-Abrasion Resistant Linings